Dhexdooda waxaa ah Haween khayr leh oo Quruxsan.
Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.
Waa Haween Indhacad oo Gurigooda jooga.
Waa Haween uusan horay u taabanin Insi iyo Jinni midna.
Waxaa barakadiisu badnaatay Magaca Eebaha wayn ee shrafta leh.
Waana (mid) hoos u dhiga kor u dhiga ah.
Marka la gilgilo Dhulka gilgilid.
Buurahana la riqdo.
Oy noqoto boodh Firdhisan.
Ood ahaataan Saddex nooc, (markaasaa dadka la soo bixin).
Kuwa midigta mari (waa Ehlu-Jannehee), ma taqaan kuwa midigta mari.
Iyo kuwa bidixda mari (waa ehluNaarkee) ma taqaan kuwa Bidixda mari.
Waa kuwa Eebe dhaweeyay.
Waxayna gali Jannooyin Nicma leh.
Waana Koox ka mid ah kuwii hore.
Sariiro Dahab laga sameeyay yayna ku sugnaan.